प्रधानन्यायाधीश जबराका जेठानले किन दिए मन्त्री पदबाट राजीनामा ?
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचारहरु » प्रधानन्यायाधीश जबराका जेठानले किन दिए मन्त्री पदबाट राजीनामा ?
काठमाडौं । सांसद नभए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको पछिल्लो मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनमा मन्त्री नियुक्त भएका गजेन्द्रबहादुर हमालले राजीनामा दिनु भएको छ । हमालले आफ्नो नियुक्तिलाई लिएर व्यक्तिगत रूपमा विवादमा तानेपछि राजीनामा गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्ने आरोप लागेपछि हमालले आजै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाउनु भएको हो । सांसद नभए पनि ६ महिनाका लागी मन्त्री बनाउन पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रवार उहाँलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । हमाल नाताले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका जेठान हुनुहुन्छ । हमालकी बहिनी बितेपछि चोलेन्द्रले दोस्रो बिहे गरेको बताइन्छ ।
लामो समय नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहनु भएका उहाँ पछिल्लो समय धार्मिक गतिविधिमा व्यस्त हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले आजै उहाँको राजीनामा स्वीकृत गर्नुभएको छ ।